Imibandela - THE INDIAN FACE
Le mibandela ejwayelekile ilawula ngokusobala ubudlelwano phakathi kwe-Indicom Europa 2015 sl (Inkampani engumnikazi wophawu lokuhweba The Indian Face) kanye nehhovisi elibhalisiwe eCalle Zurbano 41, uBajo ushiye i-28010, iMadrid kanye neCIF ESB87341327 kanye nabantu besithathu (abalandela "Abasebenzisi") ababhalisa njengabasebenzisi kanye / noma bathenga imikhiqizo esitolo sezinto online iwebhusayithi esemthethweni ye The Indian Face (http://www.theindianface.com", ngemuva kwalokhu" Isitolo ").
2.1 Umsebenzisi uyavuma, ngokuvamile, ukusebenzisa iSitolo, ukuthenga iMikhiqizo nokusebenzisa insizakalo ngayinye yeSitolo ngokucophelela, ngokuya ngomthetho, isimilo, ukuhleleka komphakathi kanye nezinhlinzeko zalokhu Izimo ezijwayelekile, futhi futhi kufanele uyeke ukuzisebenzisa nganoma iyiphi indlela engathiya, ilimaze noma iphazamise ukusebenza okujwayelekile nokuthokoziswa kweSitolo ngabasebenzisi noma okungalimaza noma kubangele ukulimala kwempahla namalungelo The Indian Face, abahlinzeki bayo, Abasebenzisi noma imuphi umuntu wesithathu.
3.1 The Indian Face kuyaligodla ilungelo lokunquma, nganoma yisiphi isikhathi, Imikhiqizo enikezwa Abasebenzisi ngeSitolo. Ikakhulu, nganoma yisiphi isikhathi ungangeza imikhiqizo emisha kuleyo enikelwayo noma efakwe eSitolo, kuqondakala ukuthi ngaphandle kokuthi kuhlinzekelwe ngenye indlela, leyo mikhiqizo emisha izolawulwa yizinhlinzeko zale mibandela ejwayelekile. Ngokunjalo, kuyaligodla ilungelo lokuyeka ukuhlinzeka noma ukwenza lula ukufinyelela nokusetshenziswa nganoma yisiphi isikhathi futhi ngaphandle kwesaziso sangaphambilini sanoma iziphi izigaba ezahlukahlukene zemikhiqizo enikezwe eSitolo.
4.1 Kungakapheli isikhathi esingamahora angamashumi amabili nane (24), The Indian Face izothumela i-imeyili kuMsebenzisi, iqinisekisa ukuthenga. I-imeyili ethi izonikeza ikhodi yokubheka yokuthenga, futhi izocacisa izici zoMkhiqizo, intengo yayo, izindleko zokuthumela nemininingwane yezinketho ezahlukahlukene ukwenza inkokhelo yeMikhiqizo ku The Indian Face.
4.4 Isiqinisekiso se-oda esithunyelwe ngu The Indian Face Akuvumelekile njenge-invoyisi, kuphela njengobufakazi bokuthenga. I-invoyisi ehambelana nayo izothunyelwa noMkhiqizo.
5.1 Umsebenzisi unelungelo lokuhoxa angaxhumana ngalo The Indian Face nge-imeyili kuleli kheli elilandelayo: thinta @ theindianface.com futhi yeka ukuthenga kungakapheli izinsuku ezingeqile kwezinsuku eziyisikhombisa (7) zebhizinisi, kubalwa kusukela ekutholeni uMkhiqizo. Umkhiqizo kufanele uthunyelwe kanye nephepha lokubuyisa eligcwaliswe ngokufanele kanye nekhophi yenothi lokulethwa noma i-invoyisi, egcwaliswe ngokufanele, izindleko eziqondile zokubuyisa umkhiqizo ezithwalwa ngumthengi-umthengi. Imbuyiselo ethi izokwenziwa ngokuya ngemiyalo yokuthi The Indian Face Yazisa uMsebenzisi ngokuphendula isaziso sabo somsebenzi wokuhoxa. Umsebenzisi kufanele abuyisele uMkhiqizo kungakapheli isikhathi esiyizinsuku eziyisikhombisa (7) ukusuka The Indian Face khombisa indlela yokubuya.
5.2 Ukuhoxa kufaka imali ebuyiselwayo yemali ekhokhiwe. Ukwenza lokhu, ikhasimende kufanele libonise ephepheni lokubuyisa inombolo nomnikazi wekhadi lesikweletu okuyo The Indian Face Kufanele ukhokhe. Isikhathi sokukhokha okushiwo sizokwakhiwa eMthethweni.
6.1 Kunoma isiphi isehlakalo, isimangalo noma ukusetshenziswa kwamalungelo abo, uMsebenzisi angathumela i-imeyili ekhelini elithintana naye @ theindianfacePlay.
7.2 Ukulethwa kwezidingo ze The Indian Face Kwenziwa ngokubambisana nabasebenza ngempahla abahlukile bokuhlonishwa okwaziwayo. Ama-oda ngeke anikezwe emabhokisini e-PO noma emahhotela noma kwamanye amakheli angapheli.
8.1 Umsebenzisi uyavuma ukuthi zonke izinto zeSitolo kanye neMikhiqizo ngayinye, imininingwane nezinto ezisendlini, imikhiqizo, isakhiwo, ukukhetha, ukuhlelwa nokwethulwa kokuqukethwe kwazo, nezinhlelo zekhompyutha ezisetshenziswe ubudlelwano nabo, buvikelwa ngamalungelo empahla yengqondo nezimboni we The Indian Face noma abantu besithathu, nokuthi Izimo Ezijwayelekile azisho ukuthi zinamalungelo amalungelo empahla eyakhiwe yezimboni nelinye ukuhlakanipha elinye nelinye ilungelo kunalelo elihlongozwe ngokufanayo.
8.2 Ngaphandle kokuthi kugunyazwe ngu The Indian Face noma njengoba icala lingabanjwa ngabaphathi besithathu bamalungelo ahambisanayo, noma ngaphandle kokuthi lokhu kuvunyelwe ngokomthetho, uMsebenzisi angeze akhiqize kabusha, aguqule, aguqule, ahlukanise, unjiniyela ongemuva, asabalalise, aqashe, aboleke, enze kutholakale, noma avumele ukufinyelela komphakathi nganoma iyiphi indlela yokuxhumana komphakathi yanoma yiziphi izinto okukhulunywa ngazo esigabeni esedlule. Umsebenzisi kufanele asebenzise izinto zokwakha, izakhi kanye nemininingwane ayithola ngokusebenzisa iSitolo kuphela izidingo zakhe, ephoqa ukuthi angazifezi, ngokuqondile noma ngokungaqondile, ukuxhashazwa kwezentengiso kwezinto zokwakha, izakhi kanye nemininingwane etholakala ngokufanayo.
8.3 Umsebenzisi kufanele ayeke ukugwema noma ukuphatha noma yimaphi amadivayisi obuchwepheshe asungulwe ngu The Indian Face noma ngabantu besithathu esitolo.
9.1 Ngokuhambisana noMthetho 15/99 LOPD, sikwazisa ukuthi imininingwane yakho kanye nolunye ulwazi olunikezwe ngefomu lokubhalisa, kanye nalokhu okuvela kokuthengiselana okwenziwayo, kuzofakwa futhi kugcinwe kufayela elizocutshungulwa The Indian Face, inqobo nje uma ukukhanselwa kwayo kungacelwa. Ukwelashwa kuzokwakhiwa ekuthuthukisweni nasekusebenzeni kokuthengisiwe, ukunakwa okwenziwe komuntu okwenziwe ngemikhiqizo nezinsizakalo ezikutholayo kanye nokwenza ngcono ukunakwa okushiwo, kanye nokukhuthaza imikhiqizo nezinsizakalo zayo kanye nokwenkampani yesithathu ehlobene The Indian Face.
Ngokufanayo, waziswa ukuthi imininingwane yakho izotholakala ezinkampanini ezihambisanayo ngezinhloso ezibonisiwe / The Indian Face Izophatha le datha ngobumfihlo obukhulu, ingumemukeli kuphela futhi ikhethekile, futhi ingenzi izabelo noma ukuxhumana nabantu besithathu ngaphandle kwalezo ezikhonjiswe yimithetho yamanje.
Umsebenzisi ugunyaza ngokusobala ukudluliselwa, ngisho nangezindlela zikagesi, ngo The Indian Face kanye namabhizinisi ashiwo ngenhla, wezokuxhumana kwezentengiso nokunikezwa kwephromoshini nemincintiswano. □ yebo, ngiyamukela.
9.2 Umsebenzisi nganoma yisiphi isikhathi angasebenzisa amalungelo okufinyelela, okulungisa kabusha, aphikisayo noma okukhansela ngokuxhumana The Indian Face, nge-imeyili ebhekiswe ukuxhumana no @ theindianface.com, unamathisela ikhophi ye-NIF yakho noma umazisi obambele.
10.1 The Indian Face Kuzosiza ukusetshenziswa kwamaphasiwedi womuntu siqu obhalisa okunjalo kuwebhusayithi. Lawa amaphasiwedi azosetshenziselwa ukufinyelela izinsizakalo ezinikezwe ngeWebhusayithi. Umsebenzisi kufanele agcine amaphasiwedi ngaphansi kwesibopho sakhe esisodwa ekusithekeni okuyimfihlo futhi okuphelele, ecabanga, ngakho-ke, ukuthi mangaki umonakalo noma imiphumela yanoma yiluphi uhlobo etholakala ekuphuleni noma ekuvezeni imfihlo. Ngenxa yezizathu zokuphepha, iphasiwedi yokufinyelela ngocingo ezinsizakalweni ezixhumene neWebhusayithi ingaguqulwa nganoma yisiphi isikhathi ngumsebenzisi. Umsebenzisi uyavuma ukwazisa The Indian Face ngokushesha noma ikuphi ukusetshenziswa okungagunyaziwe kwe-password yakho, kanye nokufinyelela ngabantu abangavunyelwe kuyo.
11.1 The Indian Face isebenzisa amakhukhi ukuze athuthukise izinsizakalo zayo, enze lula ukuzulazula, alondoloze ukuphepha, aqinisekise ukuthi ungubani uMsebenzisi, aqhubekele ukufinyelela kokuthandwa nguwe futhi alandelele ukusetshenziswa kwawo kweSitolo. Amakhukhi angamafayela afakwe kwi-hard drive yekhompyutha noma kwimemori yesiphequluli kufolda elungiselelwe uhlelo lokusebenzisa ikhompyutha loMsebenzisi ukukusiza.